Tantaran'ny kilasika amin'ireo rojo vita kanto vita kanto | Famoronana an-tserasera
Rojo vita tanana vita amin'ny sangan'asa kely entanin'ny tantara malaza
ny tantara majika taloha sy taloha Tahaka ny Little Red Riding Hood na ny sasany amin'ireo Andersen Brothers, mendrika tanteraka izy ireo ny mitafy ireo endri-pitiavana amin'ny rojo noforonin'ireo mpanakanto izay mampiseho fa, miaraka amina eritreritra kely fotsiny, dia mety ho noforonina ireo karazan-javatra vitaina tena be.
Laliblue dia nipoitra tamin'ny 2006 niaraka tamin'ny fanoloran-tenan'ny mamorona firavaka amin'ny fikolokoloana ary izay ampiasain'izy ireo ny kilasin'ny famakian-janaky ny ankizy mba hitondrany rojo vita am-boalohany. Ny iray amin'ireo izay zarainay amin'ity lahatsoratra ity dia manana endrika tsy manan-tsiny sy mitandrina miaraka amina fanamboarana avo lenta araka ny hitanao etsy ambany.
Ny rojo tsirairay noforoniny manana ny orinasany manokana ary izy ireo dia hita ho toy ny sombin-javatra misy famaranana mahafinaritra araka ny ahitanao azy ireo tsirairay. Bambi, Alice in Wonderland na Pinocchio dia sasany amin'ireo izay mety ho hitanao ary azonao atao aza ny mividy raha irinao amin'ny rohy omeko anao any amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Ny iray amin'ireo mitandrina indrindra dia ny an'ny Cinderella izay vitantsika mahita azy anaty kalesy izay ny lokon'ny rojo manontolo mihitsy. Laliblue dia manondro ihany koa ny hafalian'izy ireo amin'ny fizotran'ny famoronana iray manontolo, izay misy ny sary an-tsaina, ny fikarohana ary ny famoronana.
Ireo fitaovana iarahan'izy ireo miasa dia vy, vilany ary damina. Ny fizotrany iray manontolo dia vita tanana tananana tsy misy mpanelanelana, zavatra iray izay azo tsikaritra amin'ny endrika tsirairay. Firavaka izay tsy maintsy artisan ho iray amin'ny filan'ny nofo indrindra.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny rojo amidiny ianao dia manana ny pejiny izy ireo Etsy. ny tolo-kevitra momba ny asa tanana tena mahaliana izay hiakanjoana ny iray amin'ireo tantara malaza amin'ny fiainana manontolo ho firavaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rojo vita tanana vita amin'ny sangan'asa kely entanin'ny tantara malaza
Iconic Disney Character Namboarina tamin'ny taratasy nataon'i Jackie Huang
Logos entanin'ny hosodoko maivana